China Ammonia Absorption Scrubber Yeindasitiri Waste Gasi Kurapa fekitori uye vagadziri | Lvran
Yakananga Kubatanidzwa Shaft Dri ...
Washington City Offices Kudzokera Curved ...
Amoniya Kubvisa Kukwesha ...
Anticorrosion yakaderera temperatu ...
Ammonia Absorption Scrubber Yeindasitiri Waste Gasi Kurapa
Type: Vertical Wet Kukwesha
Garandi: 1 Gore
Kushanda: Chemical Indasitiri nezvimwe
Saizi: Yakasarudzika uye Multiple Models Kupa
Zvinhu: PP / Pe / FRP / Carbon Simbi / Isina Simbi
Yakanatswa Rate: 70% -95%
Nzvimbo yeKutanga: Dunhu reZhejiang, China
Mushure mekutengesa Service Yakapihwa: Vhidhiyo technical technical, Mahara eparutivi zvikamu, Online rutsigiro
Kuyerera Kwemhepo: Customization
Certification: ISO9001-2008 / 2015
PE Maindasitiri Wet Kukwesha KweAid Mist Kuchenesa
Equipment musimboti: Kurapa magasi anokanganisa (akadai seacid, alkaline tsvina gasi), sarudzo yemidziyo yekuchenesa ndiyo kiyi yekushandisa mvura kutora iyo gasi remarara. Parizvino, kambani yedu yakazvimiririra yakagadzira iyo acid uye alkaline tsvina gasi yekuchenesa maitiro uye michina ine yakanyanya kuchenesa kushanda, nyore kushanda uye manejimendi, uye hupenyu hwakareba hwehupenyu. Iyo hunyanzvi uye chigadzirwa zvine chimiro chakareruka, yakaderera simba rekushandisa, hunhu hwekuchenesa kwakaringana uye rinoshanda renji, inogona kunyatso bvisa hydrogen chloride (HCl), hydrogen fluoride gasi (HF), ammonia (NH3), mhute (- H2SO4) , chromium sulphate acid mhute (CrO3), hydrogen cyanide acid gasi (HCN), alkali vapor (NaOH), hydrogen sulfide gasi (H2S), gasi rinogadzika mvura senge formalin.
Asidhi mhute chiutsi gasi inoendeswa mukati yekuchenesa shongwe kuburikidza nekurongedza. Iyo gasi rekudzimisa uye iyo sodium hydroxide yekumwa mvura iri mune yakazara kuonana, kutora uye kusagadzikana kuita. Mushure mekunge asidi mhute yekudzimisa gasi yacheneswa, inosvinwa uye yakasvibiswa nehutsi yekubvisa ndiro ndokuzoburitswa mudenga ne fan. Mvura inopinza inomanikidzwa nepombi pazasi peshongwe ndokumwayiwa pamusoro peshongwe. Iyo acid mhute inopedza gasi mushure mekucheneswa inosangana neiyo standard standard.
Mamiriro: Iyo michina inotora yakarongedzwa shongwe yekuchenesa chiutsi gasi, iri yakakodzera kurapwa kwekuenderera uye kwepakati pedza gasi kubuda. Maitiro, manejimendi, mashandiro uye kugadzirisa zviri nyore kwazvo uye zvakapusa, hazvizokanganisa kugadzirwa kwemusangano; Iyo zvakare ine yakakura yekushandisa renji muindasitiri.
Chimiro:Ichi chitsva-chidimbu chinogadzira scrubber tower. Iyo inoumbwa neyeti yemvura yekuchengetera tangi, shongwe muviri, mweya inlet chikamu, spray layer, kurongedza dura, swirl defogging layer, mhepo nzira yekubuda koni cap uye yekuongorora gomba.
Kushanda: Kucheneswa uye kurapwa kweasidhi uye alkaline tsvina gasi yakaburitswa mukuita kwemakemikari indasitiri, zvemagetsi, simbi, electroplating, machira (kemikari fiber), chikafu, michina kugadzira uye mamwe maindasitiri.
Pe Kuumbwa scrubber zvakanakira
1, Raw zvinhu zvinogadziriswa, anti-kukwegura, anti-ultraviolet ,, nguva yeupenyu kusvika pamakore gumi nemashanu
2, ngura kuramba, ine yakanakisa yakaderera tembiricha kuita pane PP zvinhu (- 70 madhigirii), inokodzera kushandisa mune yakaderera tembiricha nharaunda, zvine mwero mitengo, nekukurumidza kutumira
3, chakuvhuvhu kugadzirwa standardization, iyo shongwe yemuviri kuumba isina kuwacha, yakakwira simba, kukanganisa kusagadzikana, kupokana kupokana, kuvuza 4, kukurumidza kuvhura Windows manhole kunoiswa muzasi pfapfaidzo shongwe, inokurumidza slag kubvisa basa, nyore kugadzirisa uye nyore.
Iyo yekumedza gasi yekuchenesa shongwe inomhanya mune gasi-mvura inopesana kuyerera kuyerera. Iyo inopera yekuzadza gasi inopinda mushongwe yemuviri kubva pasi pechidziro cheshongwe, inodarika nepakati yekurongedza kubva pasi kusvika kumusoro, uye pakupedzisira inosunungurwa kubva kuburitswa kweshongwe yepamusoro pombi kuburikidza neanorwisa-ngura fan. Mhinduro isina kwayakarerekera inopfuura nepakati pemvura inogovera pamusoro peshongwe, inoipfapfaidza zvakaenzana muchikamu chekurongedza, inoyerera ichidzika pamusoro pechidziro chekurongedza kusvika pasi peshongwe, inoburitswa kunze kweshongwe nepombi, uye iri inoparadzirwa neanti-corrosion inotenderera pombi. Sezvo gasi rekukwira rinokwira uye rinodzika absorbent riri kugara richisangana munzvimbo yekurongedza, kusungirirwa kwesolute mumhepo yekukwira kuri kuderera uye kudzika, uye painosvika pamusoro peshongwe, yasvika pazvinodiwa zvekutorwa uye yaburitswa kunze kweshongwe. Pane zvinopesana, iko kusungwa kwesvikiro mune iri kudzika mvura iri kuramba ichikwira uye ichikwira, uye maitiro maitiro anozadzikiswa kana asvika pasi peshongwe, uye inoburitswa kunze kweshongwe.
Pashure: Yakaderera Mutengo Gasi Kurasa Spray Shongwe Kune Acid Mist Kurapa
Zvadaro: Pe PP FRP Chinyorwa Kurongedza Shongwe YeRab Fume
Acid Fume Kubvisa Shongwe
Cyclone Plate Tray Shongwe
Plastiki Mwaya Shongwe
FRP Centrifugal Fan Blower Yakanangana mota
Yakanaka kwazvo tembiricha yekudzivirira Iyo fan fan inosangana nezvinodiwa zveiyo GB / T13274-9 (-) moto yekudzivirira kodhi bvunzo muyero, uye haizokuvadzwa kana ikamhanya ichienderera kwemaawa makumi maviri nemaviri pasi pemamiriro ekushisa akakwirira. Kubudirira kwepamusoro uye simba rekushandisa Uchishandisa CAD, CFD uye zvimwe zvakateedzana zvekuongorora uye kutsvagisa uye kusimudzira software, fan fan iri yakakura kupfuura 80%, uye mamwe manhamba emuchina akakura kupfuura 85%, uye iyo yakanyatsoita curve yakati sandara, w ...
Yakananga Kubatanidzwa Shaft Inotungamirwa Centrifugal Fan ...
CQC simba-rinoponesa chigadzirwa chitupa Iyo bvunzo yeiyo fan inoenderana neiyo GB19761-2009 yenyika standard. Iyo fan fan inogona kumhanya ichienderera kwemaawa makumi maviri nemana pasina kukuvara, ine hupenyu hwakareba hwebasa, ine simba-yekuchengetedza uye inoshanda, uye iyo unit rese inoiswa pasi pecomputer kushushikana uye kuomesa kuongororwa kuongorora simba rechimiro. Nyore yekugadzirisa mashandiro Iko kushandiswa kweoiri yekugezesa yakavharirwa tangi yemafuta inodzivirira mabheyaringi uye shaft musimboti kubva kune inoparadza gasi, pr ...
Pedza Gesi Kuchenesa Guruva Kuunganidza Mwaya ...
Iyo yekumedza gasi yekuchenesa shongwe inomhanya mune gasi-mvura inopesana kuyerera kuyerera. Iyo inopera yekuzadza gasi inopinda mushongwe yemuviri kubva pasi pechidziro cheshongwe, inodarika nepakati yekurongedza kubva pasi kusvika kumusoro, uye pakupedzisira inosunungurwa kubva kuburitswa kweshongwe yepamusoro pombi kuburikidza neanorwisa-ngura fan. Iyo neutralizing mhinduro inopfuura nepakati pemvura inogoverwa pamusoro peshongwe, inoripuruzira zvakaenzana mukati mekutakura dura, inoyerera ichidzika pamusoro peiyo pac ...
Washington City Offices Backward Curved Centrifugal Exhasut ...
F4-72-AType FRP Centrifugal Fan (Yakanangana Mota) inogadzirwa ne fiberglass yezvinhu zvakasanganiswa zvine chekuita nematanho ekuita esimbi 4-72-A centrifugal fan. Iyi nhevedzano yevafeni inogona kutakura magasi anoparadza ane acid, alkali uye zvemakemikari zvikamu. Iyo gasi rinoburitswa haribvumidzwe kuve nezvinhu zvine viscous, zvine guruva uye zvakaoma zvikamu (150m kusvika m3, tembiricha yegasi ℃60 ℃, hunyoro hwehukama .100%. Iyi nhevedzano yevafeni ine simba rakakwira, mwenje wei ...
Yakaderera Mutengo Gasi Kurasa Mwaya Shongwe YeAid Mis ...
Pe PP FRP Chinyorwa Kurongedza Shongwe YeRab Fume
1. Shongwe muviri Iyo shongwe muviri wakagadzirwa ne-anti-corrosion PE, anti-kuchembera, anti-ultraviolet, uye haichinje ruvara kwemakore mazhinji, uye ine hupenyu hweanosvika makore gumi nemashanu. Izvo zvinopesana zvakanyanya netembiricha yakadzika (-70 ℃) pane PP. Inogona zvakare kushandiswa munzvimbo dzakadzika tembiricha uye inokwanisika. Ipfupi dhirivahari nguva uye yekukurumidza kutumira. standardized mold kugadzirwa, pfapfaidzo shongwe yemuviri inoumba isina kutenderera, yakasimba simba, anti-kudhumhana, anti-kutsemuka, anti-leakage; equi ...
Centrifugal mutsinga dzinofamba nemukaka Fan, Yakakwira Pressure Centrifugal Fan, Radial Nereza Centrifugal Fan, Pedza Fani, Fume Kukwesha, Imwe Inlet Centrifugal Fan,